अर्जेन्टिनाका फुटबल लिजेण्ड म्यारोडोना रहेनन .. – Khabar PatrikaNp
अर्जेन्टिनाका फुटबल लिजेण्ड म्यारोडोना रहेनन ..
अर्जेन्टिनाका पूर्व कप्तान तथा फुटबल लिजेण्ड डिएगो म्यारोडोनाको निधन भएको छ । पूर्व अट्याकिङ मिडफिल्डर म्यारोडोनाको बुधबार ६० वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । हृदयघातको कारण म्यारोडोनाको निधन भएको बीबीसीले जनाएको छ ।
उनको मस्तिष्कको ब्लड क्लोटको शल्यक्रिया गरिएको थियो । अर्जेन्टिनाका पूर्व प्रशिक्षक समेत रहेका म्यारोडोना विश्व फुटबलका महान खेलाडी मानिन्छन् । म्यारोडोनाले अर्जेन्टिनालाई सन् १९८६ मा विश्वकपको उपाधि दिलाएका थिए ।
मेक्सिकोमा भएको विश्वकपको फाइनलमा वेस्ट जर्मनीलाई ३-२ ले हराएको अर्जेन्टिनाले विश्वकप उपाधि जितेको थियो । त्यस समय म्यारोडोना टिमका कप्तान रहेका थिए । त्यहिँ विश्वकपको क्वाटरफाइनलमा इंग्ल्यान्डविरुद्ध २-१ को जित निकाल्दा म्यारोडोना नायक बनेका थिए । उनले दुबै गोल गरेका थिए ।
इंग्ल्यान्डविरुद्ध उनले गरेको पहिलो गोललाई ‘ह्यान्ड अफ गड’ भन्ने गरिन्छ । किनकी उनले हातले गोल गरेका थिए । तर, रेफ्रीके नदेख्दा उक्त गोललाई मान्यता दिइएको थियो । अर्जेन्टिनाका लागि म्यारोडोनाले १९७७ देखि १९९४ सम्म खेलेका थिए । उनले अर्जेन्टिनाका लागि ९१ खेलमा ३४ गोल गरेका थिए ।
सन् २००८ देखि २०१० को विश्वकपसम्म म्यारोडोना अर्जेन्टिनाको मुख्य प्रशिक्षक रहेका थिए । म्यारोडोनाले युरोपियन क्लब बार्सिलोना, नापोली र सेभिया जस्ता युरोपका ठुला क्लबबाट खेलेका थिए । अर्जेन्टिनोस जुनियर्सबाट व्यवसायिक फुटबलको सुरुवात गरेका उनले १९८१ देखि ८२ सम्म बोका जुनियर्सबाट खेलेका थिए । त्यसपछि उनी बार्सिलोना आएका थिए । उनले सन् २०८२ देखि ८४ सम्म बार्सिलोनाका लागि ३६ खेलमा २२ गोल गरेका थिए । यस्तै १९८४ देखि १९९१ सम्म इटालियन क्लब नापोलीबाट उनले खेलेका थिए ।
नापोलीका लागि १८८ खेलमा ८१ गोल गरेका थिए । नापोलीबाट सेभिया गएका उनले त्यहाँ एक सिजन बिताएका थिए । सेभियामा उनले २६ खेलमा ५ गोल गरेका थिए । उनले क्लब फुटबलको अन्त्य साम १९९७ मा बोका जुनियर्सबाट गरेका थिए । तर, म्यारोडोना करिअरको अन्त्यतिर भने लागूऔषधको दुर्व्यसनमा फसेका थिए ।
लागूऔषध प्रयोगकै कारण उनी पटक पटक जेल समेत परे । उनी कोकिन सेवन गर्ने गर्थे । सन् १९९१ मा उनले १५ महिनाको प्रतिबन्ध समेत भोगेका थिए ।
Nextअर्जेन्टिनाका लिजेण्ड म्यारोडोनाको निधन !
बचाउ भनेर चिच्याएपछि बचाउँन जाँदा दुई युवाले गु माए ज्यान !
मनकामना माताको दर्शन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोस : वि.सं.२०७७ साल मंसिर ०५ गते । शुक्रबार । ईश्वी सन् २०२० नोभेम्बर २० तारिख
पाथिभरा माताको दर्शन गरि हेर्नुहोस भोलीको राशिफल : वि.सं.२०७७ साल कार्तिक ०१ गते । शनिबार । ईश्वी सन् २०२० अक्टोबर १७ तारिख
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (33669)
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (21165)
नन्दा सिंह को आखा बाट अन्धकार हट्यो पहिलो चोटि संसार देख्दा खुसिले रोईन (भिडियो हेर्नुहोस) (20099)